Fumax - mpanamboatra fifanarahana tsara indrindra amin'ny PCB avo lenta any Shina. Manome fomba fiasa manerantany momba ny serivisy PCB izahay. Ary manolotra safidy isan-karazany amin'ny serivisy fanodinana vokatra PCB maripana avo lenta izahay na amin'ny FR-4 na amin'ny fitaovana TG hafa mahatohitra hafanana sy mahatohitra hafanana. Noho izany dia afaka manamboatra fanamboarana PCB maripana avo lenta izahay ho an'ny motera automatique, indostria ary hafanana avo lenta. Afaka manamboatra PCB avo lenta izahay miaraka amin'ny sanda TG hatramin'ny 180 ° C.
Ny isan'ireo vokatra avo lenta PCB avo TG izay azon'i Fumax atolotra：
* Fanoherana ny hafanana avo kokoa;
* CTE ambany-Z axis;
* Fanoherana ny adin-tsaina mafana tsara;
* Fanoherana fikorontanana mafana be;
* Fahatokiana tsara PTH;
* Fitaovana avo TG malaza: S1000-2 & S1170, fitaovana Shengyi, IT-180A: fitaovana ITEQ, fitaovana TU768, TUC.
* Layer layers 2-28 sosona） ；
* Haben'ny PCB （Min. 10 * 15mm, Max.500 * 600mm） ；
* Ny hatevin'ny birao （0.2-3.5mm） ；
* Ny lanja varahina （1 / 3oz-4oz） ；
* Famaranana ambonin'ny （HASL miaraka amin'ny firaka, tsy misy firaka HASL, volamena miroboka, volafotsy miroboka, Vitrika fanitrihana） ；
* Preservatives mahay solder Sol RoHS） ；
* Sarontava solder （Green / Red / Yellow / Blue / White / Black / Purple / Matt Black / Matt Green Matt）
* Silkscreen （fotsy / mainty） ；
* Làlana varahina Min / elanelana （3 / 3mil） ；
* Lavaka min （0.1mm） ；
* Kilasy kalitao （Standard IPC II）.
High-TG dia anarana hafa an'ny PCB mari-pana avo lenta, izay midika hoe takelaka boribory vita pirinty natao hijoro amin'ny hafanana avo lenta. Ny board circuit dia faritana ho High-TG raha ambony kokoa noho ny 150 degre Celsius ny mari-pana amin'ny tetezamita (TG).
Ny mari-pana ambony dia mety hampidi-doza amin'ny PCB tsy voaaro, manimba diélectric sy conducteur, miteraka adin-tsaina mekanika noho ny fahasamihafana eo amin'ny tahan'ny fanitarana hafanana ary mahatonga ny zava-drehetra manomboka amin'ny fampisehoana tsy mifanaraka amin'ny tsy fahombiazana tanteraka. Raha misy loza ateraky ny fametrahana ny PCB anao amin'ny hafanana faran'izay mafy ny fangatahanao na ny PCB dia takiana amin'ny RoHS Compliant, dia ho tombontsoanao indrindra ny mijery ireo PCB avo lenta.
* Zana-kazo maro sosona misy sosona maro
* Rafitra manara-penitra fineline
* Elektronika indostrialy
* Elektronika fiara
* Elektronika avo lenta